Domain တစ်ခုကို Smart ကျကျသုံးချင်သလား? -
Website တစ်ခုမှာ Domain Name တွေကလည်း အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုအေနနဲ့ ပါဝင်တယ်။ Smart ဖြစ်တဲ့ Domain Name နဲ့ Website တွေကိုဆိုရင် Visitor တွေကပိုပြီး နှစ်သက်ကြတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကဲဒီတော့ မှန်ကန်ပြီး Smart ဖြစ်တဲ့ Domain name တစ်ခုရဖို့ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ? သင့်ရဲ့ Web Identity အတွက်ဘယ်လို Key အချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်လဲ? စတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် Domain Hunter Gatherer အဖွဲ့ရဲ့ Key Tips တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Saturday March 20th, 2021/ Blog/0Comment